Oromo Views & Headline News: 2012
Duula Siyaasaa Kaayyoo QBO irratti Banameen Balaa Boru Hordofuuf Maluuf Kan itti Gaafatamu Warruma Duula Kanatti Bobbahe
Dhaabni Ginboot 7 jedhamu diina afaaniin akka diinummaatti himatu Wayyaanee gamatti
dhiisee mooraa QBO diiguu irratti xiyyeeffatee jira. Dhaabni kun mooraa QBO keessaa
namoota qubaan lakkaawamoo kan yakka dalaganiif gaafatamoo tahan bobaa jala qabatee
akka meeshaatti dhimma bahuudhaan, guddina ABO ittiin xiqqeessuu fi kaayyoo ABO
ittiin karaa irraa maqsuuf firoota kaayyoo isaa daboo/guuza waammatee duulatti seenee
jira. Sana biras dabree, mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo bal’aa irra
ejjechuudhaan, maqaa fi kaartaa biyya Oromoo, Oromiyaaf jibba qabu saalfii tokko
malee ifatti ibsachaa jira.
Dhaabni maqaa tokkummaa Itoophiyaatiinin sosso’a jedhu kun miidiyaa harka isaa jiru
ESAT jedhamu irratti, miidiyaalee Afaan Amaaraa dubbatan biroo hunda daboo baafatee,
ABO fi hoggana ABO irratti xiyyeeffachuudhaan, duula ummatoota wal ficcisiisuuf
deemu bal’inaan oofuu filateera. Adda Bilisummaa Oromoo dhugaa fi heerawaa tahe
irraa jibbaa fi sodaa guddaa qabaachuu irraa, namoota qubaan lakkaawamoo kan dhaaba
ABOs tahee kaayyoo QBO walii galaa bakka bu’uu hin dandeenye bobaa jala qabatee
ibiddaan taphachaa jira. Duula diiggaa eegale kana irraa akka of qusatu yeroo adda addaa
hubachiifamu illee gurra ittiin dhagahu hin qabaanne.
Akka duula ololaa G7 geggeessaa jiruutti, Oromoon biyya bal’oo Oromiyaa jedhamtu
qabaachuu fi falmachuun yakka tahee dhihaachaa jira. Kaartaan Oromiyaa kan bal’ina
qubsuma lafa Oromoo agarsiisu humna kana biratti balaa Itoophiyaa diigu jedhamee akka
hamaatti balaaleffatamaa jira. Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa hojii irra oolfatee
fedhu kophaa jiraachuu, fedhus ummatoota ollaa isaa waliin tokkummaa siyaasaa
jaarrachuuf mirgi qabu humna G7 jedhamu kanaan akka yakkaatti fudhatamee bal’inaan
irratti duulamaa jira. Gabaabumatti, dhaabni kun duula diiggaa QBO ABOtiin
hogganamu irratti geggeessaa ture yeroo ammaa gara ummata Oromoo bal’aa
diinomsachuutti ol guddisee jira.
Humni kun mirgoota ummanni Oromoo qabsoo isaa hanga har’aantanaatiin kabajsiifate,
kan sirni Wayyaaneeyyuu hanga tokko amanee fudhachuuf dirqame haqee sirna abbootii
isaa duriitti deebisuuf akka ifaajaa jiru ifaan ifatti lallabataa jira. Yeroo itti ummanni
Oromoo mirgoota harka isaa gahan jabeeffachaa kanneen isa hafan guuttachuuf qabsoo
hadhooftuu geggeessuu itti fufee jiru kanatti, humni maqaa G7 jedhuun of jaare
injifannoo ummatni Oromoo hanga har’aatti argateyyuu of duubatti deebisuuf hawwii
qabu ifatti mul’isaa jira. Oromoon hiree isaa murteeffachuun ummatoota Itoophiyaaf
balaa guddaa dha jechuudhaan, ummatoota biyyattii hundumaa Oromoo irratti kakaasuuf
sagalee ol fuudhee lallabaa jira. Oromoon ummatoota Itoophiyaa hunda biratti akka saba
bulguutti akka laalamuu fi irratti duulamuuf waamichi godhamaa jira. Hogguu kun tahu
ummanni Oromoos mirga isaa mulqamuuf dhaadatamaa jiru kana dhabama irraa oolchuuf
jecha tarkaanfii fedhe fudhachuuf dirqamuun waan hin oolle. Wal diddaa kanaan balaa
bor dhalatuu maluuf ammoo kan itti gaafatamu, G7, mediyaa isaa ESAT, miidiyaalee
isaaf daboo bahanii olola farra Oromoo kana oofaa jiranii fi yakkamotoota mooraa QBO
keessaa isaanitti gananii akka meeshaatti tajaajilaa jiran tahuun ifaan ifatti beekamuu
Keessumattuu TViin ESAT jedhamu kan akka arraata G7tti tajaajilu, duula farra
Oromummaa oofaa jiruun qooda Radio Mille Collins(RTLM) wajjin wal fakkaatu akka
taphataa jiru yaadachiisuu feena. Raadiyoon Mille Collins jedhamu bara 1994 keessa
balaan Duguuginsa Sanyii Ruwaandaa (The Ruwandan Genocide) akka dhalatuuf sababa
guddaa tahuun isaa ni beekama. Ololoota hahhamoo miidiyaa kana irraan oofamaa turan
tu duguuginsa sanyii suukaneessaa san dhalche. ESATis akka amma Oromoo fi
Oromummaa irratti fuulleffatee tooftaa adda addaatiin duulaa jiru kanaatti, Itoophiyaa
keessatti rakkoon akka kan Ruwaandaa fakkaatu sun akka dhalatuuf bu’uura isaa buusaa
akka jiru ammumaan hubachiifna. Kanneen duulaan G7f daboo kana bahanii afarsaa jiran
illee gaafatama jalaa bahuu hin danda’ani.
Akkuma olitti tuqame, G7 ABO dadhabsiisee sabboonummaa Oromummaa
dhabamsiisuuf hawwii qabu dhugoomfachuuf jecha, miidiyaalee Afaan Amaaraa
dubbatan kan maqaaf walaba jedhaman mara daboo baafachuu irratti argama. Kanneen
sirna duraanii keessatti hiree barnootaa addatti laatameefitti dhimma bahuudhaan
miidiyaalee idil addunyaa kutaa Amaariffaa keessatti mindeeffamuuf carraa argatan
hundi, bakka jiran maratti dhaamsa walii dabarsanii akka itti Oromummaa doomsanii
Itoophiyummaa abbootii isaanii durii bakkatti deebisan irratti wal tumsanii hojjechaa
jiran. Duula farra Oromummaa, farra ABO fi farra mirga ummata Oromoo bal’aa tahe
kana hojii irra oolchuuf jecha, hiree miidiyaa harkaa qaban akka meeshaa guddaatti yoo
dhimma bahan mul’atu. Sagalee yakkamtoota bicuu kan QBO keessaa gananiidhaa gurra
guddisanii, sagalee ABO kan ummata Oromoo bal’aa biratti fudhatama qabuudhaa
ammoo dhoksuuf saalfii tokko malee hojjechaa jiran. Raadiyoolee, TV, marsaalee
interneetaa fi maloota wal qunnamtii leellistoota sirna duriin geggeeffaman hundumaa
irratti duula kana fakkaatu tu qindeeffamee deemaa jira.
Duulli hanga kana itti caphamee geggeeffamaa jiru garuu ummata Oromoo gowwoomsuu
hin dandeenye, hin danda’us. Murni yakkamaan hawwitoota sirna duraaniitiin
dhaadeffamaa jiru ummata Oromoo biyya keessaa fi alaa cufa biratti abaaramaa dha.
Marsaaleen interneetaa, manneen paltalk, raadiyooleen hawaasaa fi maloonni
walqunnamtii Oromoo walaba tahan kamuu murna dantaa Oromoo irra ejjetee Oromoo
irratti duula bane kana afaan tokkoon salphisaa jiran. Hanga ammaatti hawaasa Oromoo
keessaa akka namtokkeettis tahee akka gurmuutti tarkaanfii G7 kana kan deeggare tokko
illee hin galmeeffamne. Kanaafuu duulli diinummaa hogganummaa G7tiin Oromoo irratti
baname maayyiin isaa kufaatii, salphinaa fi gaabbii qofa. Akkuma dhaabni dhihoo kana
akeeke, duula geggeeffamaa jiru kanaan G7 fi tumsitoonni isaa ABO fi ummata Oromoo
moohachuu gonkumaa akka hin dandeenye irra deebinee hubachiifna. Humni sirna
duraanii deebisuu abjootu kun bu’aan duula kana irraa argatu yoo jiraate, akkuma olitti
eerame, balaa sababa duula kanaatiin dhalachuuf deemuuf suduudaan kan itti gaafatamu
Posted by Oromia at 2:32 AM
Oromo Youth Condemn a Radical Political Shift Declared by B/General Kemal Gelchu’s OLF Group.
We, the Oromo youth, want to express our disappointment and issue this press release in rejection of the so-called “New OLF Program” made public on January 1, 2012 by the OLF Change/Jijjiirama group led by B/General Kamal Gelchu.
1. The minority clique within the the OLF-Jijjiirama group does not symbolize the view of
Oromo people and their political struggle.
2. The introduced program undermines a century long Oromo struggle for self-rule and selfdetermination, including ultimate sacrifices that have been paid by countless fallen heroes and heroines.
3. The program disregards the complex Oromo political evolution, changing the entire
course of the Oromo struggle overnight.
4. The new political vision is poorly constructed, paradox, and leaves the future in doubt.
5. The program devalues the mission and objectives of the Oromo Liberation Front, thus
compromising the interests of the Oromo people.
The above organizers can be contacted at this e-mail: OromianYouthVoice@gmail.com
Posted by Oromia at 10:34 PM
Duula Siyaasaa Kaayyoo QBO irratti Banameen Balaa ...